Seelota - Wikipedia
(Seelii irra kan qajeele)
Seeliin (jecha Laatinii cella jedhurraa dhufe) bu'uura caasaa, tajaajilaa fi baayoloojikaawaa lubbu qabeessa hundaa ti. Seeliin bu'uura lubbu isa xiqqaa kan horuu danda'u yoo ta'u yeroo baayyee dhaga bu'uuraa jireenyaa jedhamee beekkama. Qorannoon seelii baayoloojii seelii jedhamee beekkama.
Seelonni pirootoopilaasmii membireenin marfame qabu, kunis baayoomolokiyuulii akka pirootiinii fi niwuukiliik asidii baayyee of keessaa qaba. Orgaanizimoonni seel-qeenxee (kan seelii tokko qofa qabu; baakteeriyaa baayyee dabalatee) ykn seel-hedduu (biqiltootaa fi bineeldota) ta'uu danda'a. Lakkoofsi seelotaa biqiltootaa fi bineeldota keessatti sanyiirraa sanyiitti gar gar yoo taa'u namoonni seelota naannoo tiriliyoona 100 ta'u qabu. Seelin biqiltootaa fi bineeldotaa baayyen mayikiroskooppii jalatti qofa mul'ata, guddinni isaas maayikiroomeetirii 1 hanga 100 ta'a.
Seelin Rooberti Huukin bara 1665 argame. Tiyoorin seelii, kan jalqaba 1839tti Jakob Schleiden fi Theodor Schwann ummame, yoo ilaalamu orgaanizimoonni hundi seelii tokkoo fi isaa ol kan qaban ta'uu, seelonni hundi seelii duraan jirurraa kan dhufan ta'uu, tajaajilli gurguddaan orgaanizimootaa seelii keessatti kan raawwatamu ta'uusaa, fi seelonni hundi odeeffannoo dhaalan darbu kan tajaajila seelii too'achuu tajaajilu kan qaban ta'uu fi odeeffannoo dhaloota seelii kan itti aanutti kan dabarsan ta'uu dubbata. Seelin lafarratti waggaa biliyoona 3.5 dura ummame jedhamee tilmaamama.
Beekumsii baayolojii gahen qonnaa irratii biyyakeenyaf kenuu malii
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Seelota&oldid=31424" irraa kan fudhatame
Last edited on 17 Adooleessa 2019, at 18:07
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 17 Adooleessa 2019, sa'aa 18:07 irratti.